ငါးပါးသီလနှင့်မြောက်ကျွှန်းနေလူများအကြောင်း - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
mmt မှ July 8, 2012 12:55am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဥတ္တရကုရုခေါ်သော မြောက်ကျွှန်း၌နေထိုင်ကြသည့် လူတိုပသည် အမြဲ နိစ္စ ငါးပါးသီလကို လုံခြုံကြသည်။ ယင်း ငါးပါးသီလလုံခြုံသူတို့၏ ဓမ္မတာသိဒ္ဓိကြောင့် အောက်ပါဝိသေသန အကျိုးထူးများကို ခံစားကြရသည်။
၆။ စားသောက်မှုအတွက် ဝယ်ရ၊သွားရ၊ချက်ရသော ဒုက္ခမျိုးကင်းသည်၊ အခွံမပါ ဖွဲကင်းသောသလေးဆန်ကို အာဟာရအဖြစ်သုံးဆောင်ရသည်၊ ပကတိထင်းမီးဖြင့် ချက်မနေရ၊ ဇောတိကမည်သော ရတနာကျောက်တုံးပေါ်တင်လိုက်လျှင် ချက်ပြီးဖြစ်၏၊ဟင်းနှင့်ဟင်းလျှာအတွက် သီးခြားစီမံနေစရာမလို၊စားလိုသု၏ူက အချဉ်တမ်းတလျှင်အချဉ် အချိုတမ်းတလျှင်အချို အရသာပေါ်လာ၏။
၇။ အထက်ဖော်ပြပါ အဟာရကိုမှီဝဲသောကြောင့် နှုနာ၊ပွေး၊ညှင်း၊တင်းတိပ်နာ၊ချောင်းဆိုးပန်းနာ၊မြစ်ချောက်နာ၊အရှုးရောဂါနှင့်အိုနာများ ကင်းဝေသည်။
၁၁။ မြောက်ကျွှန်း၌ ကုန်းသူ၊ကွသူ၊ ကောက်သူ၊ကွေးသူ၊ခွင်သူ၊ လေငန်းဆွဲသူ၊အင်္ဂါချို့တဲ့သူ၊ဣနြေ္ဒချို့တဲ့သူမရှိချေ။
၁၆။ မိဘတို့ကရင်သွေးငယ်အတွက် ကြောင့်ကြစိုက်နေစရာမလို၊ ကလေးများဆော့ကစားရာ အိပ်ပျှော်ရာမှာထား၍ လိုရာသွားနိုင်သည်။ တွေ့သူက အစားကျွှေးနို့တိုက်သည်။ ကလေးများကံကြောင့် လက်ညှိုးမှ နို့ထွက်သည်။
၁၈။ ရေချိုးသည့်အခါ စုပေါင်းရေချိုးကြသည်၊အဝတ်ကိုစုပုံထားသည်၊ပထမရေချိုးပြီးသူကအပေါ်ဆုံးမှအဝတ်ကို ယူဝတ်သည်။ငါ့ဟာ သူ့ဟာ ငြင်းခုံမှုမရှိ။
၂၀။ အပုပ်နံ့မရှိ၊ သုသာန်သင်္ချိုင်း ထားစရာမလို၊သေသူ၏ရုပ်ကလာပ်ကို အဝတ်ဖြင့်ထုပ်ပတ်၍ ချထားရသည်၊ ကုသိုလ်ကံ အဟုန်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ငှက်ကြီးများက တခြားကျွန်းသို့ ယူဆောင်သွားကြသည်။
(သာရတ္ထဒီပနီဋီကာမှ) posted by BuddhaInMyLife Views: 302
ဘလော့အမျိုးအစား((ဗဟုသုတ), တရား) Like3members like this
နှင်းဖြူ သည် July 20, 2012 က 2:50pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့ မှတ်သားသွားပါတယ်...... မေနိုဗယ် သည် July 11, 2012 က 12:51pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ သိချင်နေခဲ့တာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ် မြောက်ကျွန်းနေလူများရဲ့ရုပ်ရည်ဟာ ဘယ်လိုရှိလဲမဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ တောင်ကျွန်းနေ လူအများလိုပဲ ရုပ်ရည်ရှိကြပါသလား padout သည် July 10, 2012 က 10:53amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ wowww.... ayan kg tae naw.. thankalot let me know.. thankkkk ဦးအောင်ကိုး သည် July 10, 2012 က 1:26amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ Can some one pin point where is the မြောက်ကျွန်း in this world.? Thank you. ကလေးတို.ဆရာမ သည် July 9, 2012 က 7:17pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အဓိက ဆိုလိုတာကတော့ “ ငါးပါးသီလ“ မြဲခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ- အားကျစရာနော်-
ငါးပါးသီလလုံခြုံသူတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားရင် သူတို.လို ဖြစ်ပါ့မလား-
အင်း- ဒါပေမဲ့ အမြတ်ဆုံး နိဗာန်နဲ.တော့ မဝေးချင်ဘူး - ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ မောင်ခိုင် သည် July 9, 2012 က 3:31pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ မှတ်သားရလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ Thaung Tan သည် July 9, 2012 က 2:21pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ မြောက်ကျွန်းနေသူတို့ ရဲ့အခွင့်အရေးတွေ ကအကောင်းတွေချည်းဖြစ်နေတော့ တောင်ကျွန်းနေသူတွေအတွက်တော့ လိုချင်စရာပေါ့နော် သူတို့သက်တမ်း ကြည့်တော့လည်း နှစ်တစ်ထောင်တဲ့ ဘာမှလုပ်စရာလည်းသိပ်မလို နေစရာ စားစရာ ကအစ မပူပင်ရတော့ နေချင် ရောက်ချင် လည်ချင်ကြတာပေါ့ တကယ်တော့ လောဘ တွေပါပဲ ၊ သုခ အရိပ်အရောင်ပြနေတာကိုး၊ ဒုက္ခ ဆိုရင် မလိုချင်ကြဘူး ဒါ သဘာဝပဲလေ အသာစံချင်တဲ့စိတ်က အမြဲလိုလိုကိုယ့်အပေါ်လွှမ်းမိုးနေတယ်၊ ဒုက္ခကို ဘယ်လိုမြင်မလဲ၊ ဒုက္ခကိုမြင် မှ ဒုက္ခ ကိုမလိုချင်တာလာမှာ၊ ဒုက္ခ ရဲ့ အရိပ်အရောင်နဲ့ ဝေးနေမှတော့ နိဗ္ဖာန် နဲ့ ဝေးပြီပေါ့၊ ဗကဗြဟ္မာကြီး ဘုရားချွတ်သလို ချွတ်မှ ကျွတ်တမ်းဝင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည် July 9, 2012 က 12:12pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဗဟုသုတရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ waiphyolwin သည် July 9, 2012 က 11:21amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ကျွန်တော်သိတာကတော့ မြောက်ကျွန်းသူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ“နိဗ္ဗာန်' မရောက်ဘူးတဲ့
တောင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းတည်းမှာဘဲ“နိဗ္ဗာန်" ကို ရောက်နိုင်တာ။
ဟုတ်မဟုတ်သိတဲ့သူရှိရင်ဖြေပေးပါခင်ဗျာ။ Angledaewi သည် July 8, 2012 က 11:17pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ငါးပါးသီလုံခြုံချင်းကအကျုီုးကတန်ဖီုးကြီးမားလှပါတယ်။ ‹ Previous
Top News · Everything dimplemit leftacomment for ဝင်းထိုက်စိုး"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"4 minutes agoလှိုင်ကျော်ထွေး posted blog postsဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ်တို့က ကိလေသာတို့ကို မပယ်နိုင်ဘူးလား7 minutes agodimplemit leftacomment for မနီ"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"9 minutes agodimplemit leftacomment for tuntunwin"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"11 minutes agodimplemit leftacomment for thin thin hlaing"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"15 minutes agodimplemit leftacomment for thawdar"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"17 minutes agodimplemit leftacomment for steve"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"26 minutes agoThwe zin commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'ဥပုသ် သီလ စောင့် ခြင်း ၏အကျိုး ကျေးဇူးမှာ…..'"ကျေးဇူးတင် ပါတယ်ရှင် မှတ်သား သွားပါတယ် ရှင့်"30 minutes agoThwe zin liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ဥပုသ် သီလ စောင့် ခြင်း ၏အကျိုး ကျေးဇူးမှာ…..'31 minutes agodimplemit leftacomment for shine ahkar"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"35 minutes agodimplemit leftacomment for nyeinchanwin"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"38 minutes agoThwe zin liked အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'ဒီနေ့လည်း လွန်ဆွဲဦးမယ်'45 minutes ago More... RSS